Njikọ aka maka ụmụ nwanyị na ụmụ nwoke.
Njikọ aka yiri mgbaaka
Omenala maka mgbaaka itinye aka na-agbanwe iche dabere na oge, ebe, na ọdịnala. Mgbakwunye njikọ aka abụrụbeghị ihe ọhụrụ, mgbe enyere onyinye dị otú ahụ, ọ dị iche na mgbaaka agbamakwụkwọ.
Ntinye aka n’aru umu nwanyi
Umu nwanyi, ge nti. Rọrọ nrọ banyere ụbọchị gị pụrụ iche kemgbe ị bụ nwata. 'Ve cheworu n’uche gị, mmeme ahụ, ịgba egwu mbụ; nkọwa niile. Mana, did nwetụla mgbe ị chere echiche banyere ụdị ụzọ dị iche iche ọ ga - esi tinye aka ụmụ nwanyị nwere?
Yourbọchị zuru oke gị, n'ezie, dị oke mkpa. Agbanyeghị, mgbanaka ahụ bụ ihe ị ga-eyi kwa ụbọchị maka ndụ gị niile na o kwesịrị ka o zuo oke.
Mgbakwunye mgbaaka maka ụmụ nwoke
Ọ bụrụ na ụmụ nwanyị nwere ike iyi mgbaaka aka iji kwupụta ọkwa ha, gịnị kpatara enweghị ụmụ nwoke? Ọfọn, n'ezie enweghị ihe kpatara ya. Dika otutu ndi di na nwunye choro ka ha yi ihe akaebe banyere onodu ha ma dika ndi mmadu na-anabatakwa mmekorita nke ha na ndi ozo.
Oke ọla edo, ọla edo ọcha, ọla edo edo edo, platinum ma ọ bụ palladium?
Ndị na-achọ mma taa na-enweta ụdị ọla dị iche iche dị ịtụnanya na agba dị iche iche. Ọ bụ ezie na nhọrọ dị ka platinum na palladium na-aghọwanye ndị na-ewu ewu, ọla edo bụ nhọrọ dị egwu mgbe niile. Mụta banyere ọdịiche dị n’etiti ọla edo edo edo vs. nke ọla edo vs. ọla edo na-acha ọcha bụ ụzọ dị ukwuu iji wedata nhọrọ gị mgbe ị na-ekpebi ụdị ọla ị ga-ahọrọ maka ọla ahụ nke na-anọchi anya ịhụnanya na ndụ gị.
Mgbakwunye itinye aka mgbaaka
Ekwela ka ego kwụọ gị ụgwọ. Enwere ọtụtụ nhọrọ dịnụ maka mgbanaka njikọ aka ọnụ ala. N'ezie, ihe “dị ọnụ ala” pụtara nke ukwuu. Ma ezie na mmefu ego nwere ike ịdị iche, onye ọ bụla nwere otu.
Gburugburu solitaire, oval, emerald, pear ma ọ bụ ada eze ebibere diamonds, njikọta nke ụdị, ụdị na ọdịdị enweghị njedebe.
Onye ọ bụla nke anọ C (Carat Weight, Cut, Color, Clarity) na-esonyere eserese diamond na-egosi ọdịiche dị n'etiti akara. Mgbe ịmụtakwu ihe, ọ bụrụ na ịchọrọ ịhụ dayamọnd n'onwe gị, gaa na ụlọ ahịa ọla gị. Nweta a mma nke ihe gị onwe gị kpọrọ na a diamond.
Mgbaaka njikọ gemstone bụ nhọrọ zuru oke maka ụdị ahụ pụrụ iche, nke ọdịnala nwere obere na agba. Yiri otutu nke mgbanaka sitere na nke osisi vaịn, a na-eji mgbaaka ọla gemon mee ya na ọla dị mma, site na emeralds na rubies ruo sapphires, morganites, opals… A na-ejikarị ọla edo dị ka etiti etiti nke nwere obere okwute ma ọ bụ okwute na-enweghị agba.
N'ime afọ niile a enweela ọtụtụ ndị na-emepụta mgbanaka mgbanaka, dị ka Tiffany, cartier na Harry Winston, ndị ụdị ahịa ha aghọọla ọnụ na okomoko. Onnweta olaedo pụrụ iche na nke pụrụ iche na ijikọ ya na ndị ahịa bara ọgaranya na ama ama na-enyekarị ndị na-emepụta mgbanaka aka na-akwanye ugwu na ike pụrụ iche. A maara ya nke ọma n'ụwa ụwa nke ihe ịchọ mma na aha njirimara nke ọla na-abụkarị ọnụ.
Ndị na-emepụta anyị nwere ike ịmepụta otu ụdị omenala maka gị. Site na ọtụtụ nhọrọ, ị ga - achọta ụda zuru oke maka oge gị zuru oke.